Windows 10 inokwira kumusoro, GNU / Linux inodonha paSteam | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Linux Mitambo, Linux vs. Windows, chiutsi
Nehurombo hazvisi zvese nhau zvakanaka kune vashandisi veLinux, panguva ino isu tinofanira kuzviziva izvo Microsoft Windows 10 iri kuve isingazivikanwe mambo weSteam, kuve inonyanya kushandiswa sisitimu yekushandisa uye kukura muhuwandu hwevashandisi nayo. Pane kupokana, GNU / Linux inoramba ichidonha, nhau dzakaipisisa mushure mekufambira mberi kwakaitwa mumunda wemitambo yemavhidhiyo yeiyo Tux chikuva ...
Huwandu hwavo hunofanira kukura kuitira kuti makambani agadzire mamwe mazita eLinux pachinzvimbo, uye kunyangwe kukura kukuru kweiyo nhamba yemavhidhiyo mavhidhiyo eLinux, chikuva chedu chinoramba chichiwira pamusoro pechinhu chisingabatike Windows 10. Zvinotaridza kuti Windows 10 irikutorerana nezvakaoma kumbotangira, Windows 7, sezvo 8 na8.1 vasina kusvika pamanhamba e7. Asi idzodzo inhau dzakanaka kuvashandisi veMicrosoft system, chinonyanya kundinetsa ndiko kuderera kweLinux pane Steam.
Iwo manhamba anozvitaurira ivo, Windows 10 inotova neepesenti yevashandisi yakakwira kupfuura 39.68% pane Steam yeiyo 64-bit vhezheni. Windows 7 yakatenderedza 32.25%, saka zvakare inotanga kudonha nekuda kwekuvandudzwa kwesystem nyowani iri kuitwa nevazhinji, sezvo mwedzi mishoma yapfuura vaive vakasungwa zvakanyanya kana zvishoma pa34%. Kana zvasvika kune vatambi, Windows inotonga nekure, ne 95.42%, ichisiya iyo yega yega muzana yeMac OS X neLinux.
Chinhu chakanyanya kushata ndechekuti chiyero ichi chiri kukura uye kudzipura chikamu chakamanikana icho chinoshandiswa system Apple uye iyo ine iyo penguin. Chinhu chinoshungurudza vatambi vane iyo Linux komputa. Zvinozivikanwa kune vese kuti Windows yagara iri iyo "yekutambisa" inoshanda sisitimu, asi nhau dzakanaka dzekukura kwemazita paSteam dzaitaridza kuti vaizochinja izvi (kunyangwe zvisiri zvehusiku), kunyangwe zvanga zvisina kudaro. Zvirinani izvozvi, asi isu tinofanirwa kurwira kudzosera izvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Windows 10 inokwira kumusoro, GNU / Linux inodonha paStam
Kevin Rodriguez akadaro
Mhoro! Ndatenda nekugovana iyi ruzivo. Ichokwadi ndechekuti pane zvinopesana ini ndinofunga kuti nekusvika kweSteamOS uye kuti mimwe mitambo irikuendeswa kuLinux, iwo manhamba anofanira kuwedzera zvishoma nezvishoma. Ini ndinogara ndichitamba kubva kuLinux.
Iwe unayo chero yepamutemo sosi iwe yawakawana ruzivo kubva? Chete nekuda kwekuda kuziva.
Kwaziso uye chinyorwa chakanaka
Pindura kuna Kevin Rodríguez
Zvinonyadzisa. Nekudaro, kunyangwe paine kuyedza, inoramba iri pachena uye ichibvuma kuti Linux sepuratifomu yemitambo yemavhidhiyo, haina kuchena. Yakavandudza, ndeyechokwadi, uye yakawanda kwazvo, asi zvinoita sekunge haina kukwana (uye ndakairarama).
Kana zvichinyanya kuitika kuti izvi zviri kuitika. Asi chaizvo, kana uine muchina weLinux, hazvifanirwe kuve nebasa kana makambani achiramba achigadzira mitambo yemaitiro ese. Uye zvinoita kwandiri kuti Windows 10 inoramba ichikura nekuda kwezvikonzero zvinoverengeka, ivo vanozviisa mukati mako uye pakati pevatambi vanozvikurudzira kwavari pakuita zvimwe. Uye zvechokwadi kwete kuverenga iyo mamirioni-madhora bhizinesi kumashure kweMS nekutamba.
Ini ndinoramba ndichinetseka kuti chii chingaitika kana semuenzaniso COD kana CSGO kana chero mutambo weAAA ungazoburitsa zvakawanda ne vulkan uye raibhurari iyi yaive yakasarudzika kuLINUX. Kwaziwai!
Pandaive ndichirovera kumanheru, ndanga ndichiongorora nhau dzichangobudikira dzakatenderedza nyika yeLinux uye ndikaona kuti nhau idzi dzinoodza moyo, pakarepo zvakakonzera kuti huswa hwakamira nguva isati yakwana uye skrini yangu yakasviba, asi ini handina hanya zvakanyanya, nekuti ndakatsunga kumiririra Tux mhiri kwebhodhi kuti agone kubudirira uye ave munzvimbo yaanofanirwa.
PS: Zvakaoma kuisa mashanga pasi!
Iwe unoda musikana asi muise mask paari neiye stallman kumeso!
hahaha neuso hwaRichard hunopenga vari kuzomubvisira chishuwo chake chese hehehehe.
Ini ndiri mushandisi weese Windows (8.1) uye Ubuntu 16.04 (uye akawanda mamwe ma distros). Kubva pane yangu yeLinux yekuona (junior kusvika mukuru), ndinofunga idzi inyaya yakaipa, nekuti izvi zvinodzivirira vatambi vashandisi veWindows 7, 8.1 na10 (mune uyu musoro wenyaya) kubva kutama vachienda kune mamwe maStros OS kana Manjaro Gaming (ino yekupedzisira mumwe akandifadza). PDT: Ini handifunge kana kufunga nezve kumutsiridza yangu Windows 8.1 (inononoka uye isina kuchengetedzeka, asi ini ndinogona kunge ndichienderana nechimbichimbi) kune izvozvo Windows 10 marara, sezvo iri zvakare muridzi, mutongi wepachivande, zvinotora maawa akawanda ku kuvandudzwa. Ini ndatanga kuda kugoverwa kweLinux, senge Ubuntu, Wifislax, Manjaro, nezvimwe. Ini ndinodawo Android, asi ini handizvione se100% Linux distro sezvo ichiitwa nekugadziriswa neGoogle, ngatitii 90%. Ndatenda.
Kusiyana nevazhinji, kushingairira kwangu pakasvika steam munyika yeLinux, yanga isina kunyanya kuwanda.
Ndinovimba mitambo yakazvimirira inoenderera ichikura, kunyanya yakavhurwa sosi.
Makore mazhinji kudaro vachirumbidza zvakanakira kuziva kuti tiri kuisa, yekugona kuigadzirisa paunoda, yekugona kuiisa chero kwatinoda, nguva zhinji sekuda kwedu ...
Tinofanirwa kuona zvinhu sezvazviri: isu tiri chikamu chidiki pakati pevashandisi vemasisitimu anoshanda. Uye Microsoft ine bhizinesi rakabudirira kuita bhizinesi kukwezva vashandisi vatsva. Isu tatoona akati wandei ezviito izvi, yekupedzisira, iyo nzira inoenda kuWindows 10 ichiita zvakapusa kugadzirisa, sezvatinoita patino gadziridza vhezheni yezvipo zvedu. Tinofanira kuramba tichisimbirira uye tichiratidza kuti isu tiri shasha yekushandisa, uye isu tiri mune zvese, Windows haitipfuure pane chero chinhu, haina kana kutisunga, kunze kwechinhu chimwe chete: nzira dzekukwezva vashandisi. Ikoko isu tave tichirasikirwa, uye isu tinoramba tichirasikirwa. Kana zvasvika kumitambo, nepo ichirwadza, ini handishamiswe nenhau. Sangano reValve harisi kuita zvakanaka maererano nerutsigiro rweSteamOS. Ini ndinofunga paive nekuwandisa kwekuvimba, uye kusarongeka kuenzanisira zviwanikwa mune iyi nyaya. Asi zvakafanana nezvose, isu hatifanire kupa ruoko kumonyorora, tinofanira kuramba tichimanikidza, munzvimbo ino, uye mune vamwe. Tichine dambudziko guru redesktop, inova imwe nyaya yakamirira. Tinofanira kuenderera mberi nekushanda, tichiziva zvatiri, uye kujekesa nezve zvatingave. Pane masimba edu.
Tinofanira kuona zvinhu sezvazviri: isu tiri vashoma chikamu chevashandisi vevashandisi. Mitambo, senge kuvandudzwa kweGNU / LINUX desktop, achiri mamwe emabhizimusi edu makuru asina kupera. Panyaya yemitambo, Valve Corporation haina kuwana mukana wekukwikwidza kwekuparadzirwa kweSteamOS, inogara ichingosaririra kumashure kana ichienzaniswa neWindows, uye kwete nekuda kwekukanganisa kwekushanda kwedu, asi nekuda kwekukanganisa mukusimudzira, kutsigira uye kugadzirisa. Asi zvinorwadza uye panguva imwechete handishamiswe nekuderera kwedu. Zvinondirwadza nekuti ini ndinoona iyo Valve Corporation yekuedza uye kubudirira kwayakave nayo, asi hazvindishamise, nekuda kwehunyanzvi uye nekuvandudza kuri kuburitswa neMicrosoft munzvimbo iyi, zvakare, ngatizivisei kuti tiri kutarisana ne kambani yakagadzira zano rechokwadi rekukwezva vashandisi pasirese. Uye isu tese tinoziva kuti zano iri rashandisa ese marudzi ese zviwanikwa. Tinofanira kuramba tichimanikidza, tichiomerera pane kugona kwesystem yedu, pamusoro pazvose, kujekesa zvatiri, uye nezvatingave. Pane masimba edu.
Pane chero munhu anoziva kana dota 2 inogona kumhanyiswa neIntel hd 5500 mifananidzo kubvira isati yagadzirwazve kuti iberekwazve kana chimwe chinhu chakadai zvaigoneka mushure meizvozvo aiwa uye ini ndakamanikidzwa kutamira kune w10 ikozvino ndinovimba Linux mint 18 kuyedza zvakare sezvo ndasuwa Linux uye win2 inondibvisa mubhutu
Ndatamba iyo Dota 2 yakazvarwa patsva ine 4200U iyo hongu, komputa iri pamoto, saka kana ichigona. Nenzira, nekuuya kuri kuuya kweTafura 12, iwe unofanirwa kugona kutamba neVulkan, uye iwe unofanirwa kuona kuvandudzwa mukuita. Chimwe chinhu ndechekuona kana Mesa 12 yasvika kuCanonical repos.
Dambudziko nekukura kwemawindo 10 ndeye yemahara yekuvandudza pamwe neyekutanga emitambo mitsva, yakasarudzika kune windows. Ini ndinoshandisa ubuntu, manjaro uye windows10. Zviripachena windows vanoshandisa chete mitambo. Nekuti pane mitambo isingatambe pane linux zvinosuruvarisa. Dambudziko makambani ekuvandudza mutambo wevhidhiyo.
giuseppe ferreri akadaro
Ini ndinofunga uri kuiongorora kubva kune isiriyo maonero ekuona. Kuti uzive kana iyo nhamba ichiwedzera, iwe unofanirwa kuziva kuti mangani mapoka aive neSteam paLinux uye kana iyo nhamba yawedzera.
Kuti mwero wemawindo unowedzera? Ipapo zvakaringana kuti uone kana zviripo zviverengero chaizvo zvakatorwa. Ko kana ndine windows 7 pane yangu pc uye Steam uye mangwana ndinogadziridza kusvika gumi uye ini ndichine Steam? Steam inozvitora kureva kuti kune maPC maviri kana ma10?
Ini handivimbe izvi zviverengero zvakanyanya, zvirokwazvo Windows ine yakawanda kwazvo maGamers asi ini handifunge kuti Linux parizvino iri pasi.
Pindura Giuseppe Ferreri
Samaniego Eignar akadaro
Valve inofanirwa kuisa stammachine yayo patsoka dzayo zvakanyanya uye ichisimbisa kuti inyaradzo, kwete pc, uye kuti sekomboni inofanirwa kuve nekodzero yekutendera mamwe makambani emitambo kuburitsa mitambo yavo ye steamos.
Pindura Samaniego Eignar
Ndingadai ndisina chokwadi nezvazvo, MS yakagara ichishandisa "Statistics" senzira yekukonzeresa mushandisi wekupedzisira, kuMexico makambani ese e "Survey" akafanana ne "masangano ekuyera" zvese manyepo, zvinoshandiswa zvakaenzana neiyo · Sarudzo yaCalderòn mutengesi, apo chokwadi chaive chekuti AMLO yakahwina sarudzo dzese muna 2006 uye muna 3012, haugone kutenda chimwe chinhu icho MS kana maMS bots avo anoti
Ungachinja sei mabhatani ekudzora hwindo muElementary OS